Ukuguqulwa kwe-Ultrasonic kwe-Starch Granules Slurries - Ubuchwepheshe be-Hielscher Ultrasound
Isitashi sitholakala kalula emithonjeni yemvelo, njengezambane, ummbila noma ummbila. Ukuguqulwa kwesitashi kuyadingeka ukuze kuthuthukiswe izakhiwo zomzimba namakhemikhali. Ama-reactors ase-Hielscher ultrasonic akhuthaza ukuguqulwa ngokomzimba, amakhemikhali, nokuguquguquka kwe-starch okuholela ezakhiweni ezingcono zokusebenza ekusetshenzisweni kokudla nezimboni ezingezona ukudla.
Kuzo zonke izinhlelo zokusebenza zokuthengisa kufanele ziguqulwe ngamakhemikhali noma ngokomzimba ukuze zithuthukise izimfanelo zabo ezinhle noma ukunciphisa amaphutha abo. I-Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu yokuguqula umzimba, amakhemikhali, ne-enzymatic of starches. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic adlulisa amagagasi amakhulu kakhulu e-ultrasonic ibe yi-starch slurries. I-cavitation ye-ultrasonic ephumela ekukhuthazeni:
ukuchithwa kwemishini nokuphazanyiswa
i-granule yokungena nokuvuvukala
UIP1000hdT ye-Slurry Sonication
Ukuguqulwa kwamakhemikhali we-Starch
Ukuphazanyiswa kwe-Ultrasonic yokuvimbela ukukhishwa kwe-granule ehambisana nesakhiwo esiphezulu sokungena emanzini ku-starch granule kuholela ekuthuthukiseni kwe-reactant kinetics ye-esterification, ye-etherification, i-hydroxypropylation noma i-oxidation kanye ne-acid ukuguqulwa kwama-starch polymers. Amakhamera we-Hielscher ultrasonic aklanyelwe ukucubungula okuqhubekayo. Izinga lokuphendula eliphezulu liholela ekwandeni kwamandla okuhambisa amanzi.
I-Alkaline Starch Modification
Ukuze kusetshenziswe okuningi okutholakala kwe-starch derivatives, okusebenzayo, ama-reagents eziphilayo afakwe kuma-aqueous starch slurries ngenkathi elawula ukungenwa kwemvelo nokushisa. Ukuqinisekiswa kwe-starches ngokuvamile kwenziwa nge-pH 7 kuya ku-9. I-pH eneminyaka engu-11 kuya ku-12 isetshenziselwa ukutholakala kwamanqamu. Izindlela zokushisa ezijwayelekile ziyi-60 ° C. Ngaphandle kokunikezwa kwe-sonication, izinga lokushintshwa kwezintambo zokuhweba ngokuvamile liphansi kuka-0.2. I-Ultrasonication isiza ukufaka endaweni okuholela ekutheni okunamanzi okunethezeka kwamanzi.
I-Acidic Starch Modification
Ukusabela kwe-starch slurry nge-dilch hydrochloric noma i-sulfuric acid ku-40 kuya ku-60 ° C kuholele ekutheni kube khona ama-starch or starned starches. Lezi zinhlanzi ezincane ezingenayo i-deplitude zikhiqiza imikhiqizo edala i-viscosity encane. Ama-octenylsuccinate we-starch ayancipha kancane kancane ukuze kuvunyelwe okuqukethwe okunamandla kakhulu okuyi-stray drying kwemikhiqizo ehlanganisiwe. I-Ultrasonication ngesikhatsi i-acidilysis e-mild acid ingakwazi ukuhlukanisa ama-nanoparticle ama-aggregate afaka phakathi ne-hydrolysis. Lokhu kwandisa isivuno se-starch nanoparticles.
Emva kwenkambiso, i-slurry yokusabela ayitholakali, isib. Ngokufaka i-hydrochloric noma i-sulfuric acid ngemuva kokucubungula kwe-alkaline.
Ukuhlanza amanzi, njengokungena kwe-countercurrent ku-hydrocyclones, kulandela ukungathathi hlangothi kwe-starch slurries modified. Kulesi sigaba, i-ultrasonication isiza ukugeza nokuhlanza izinhlayiya zomuntu ngamunye. I-cavitation ye-ultrasonic ihlakaza isitashi se-granule agglomerates futhi yandisa ukudluliswa kwamandla emkhatsini wengqimba emkhatsini we-starch granules nesigaba se-aqueous.
I-Starch Filtration nokuma
Amadivaysi ama-ultrasonic ase-Hielscher asetshenziselwa ama-ultra-filtration noma izinqubo ze-nano-filtration kanye nokomisa okulandelayo.
Ukuguqulwa komzimba kwesitashi (imishini)
Ukuguqulwa komzimba kwamanqamu akubandakanyi ukusetshenziswa kwamakhemikhali. Noma kunjalo, i-ultrasonication iholela ekushintsheni kwisakhiwo samathambo se-starch elandelwa ukuhlukahluka kwezakhiwo ze-physicochemical kanye nokusebenza. Amandla we-shear cavitational we-shear ahlanekezela isifunda se-crystalline ngama-starch granules. Amaketanga e-polymeri eduze nezinsiza ezincane eziwa phansi zibanjwe ensimini ephakeme ye-shear gradient eholela ekuqhekekeni kwezibopho ze-macromolecular CC, nokwakhiwa kwama-radicals amade. Izithombe ze-SEM ze-starch ezenziwe nge-sonicated zibonisa ukulimala komshini, njenge-fissures, i-depression, ne-pitting. Lokhu kubangela umthamo wokunwa kwamanzi aphezulu, amandla okuvuvukala aphakeme, nokuzikhweza kwamanzi. Lo mphumela ungcono kuma-amplitudes we-sonication ephakeme. Ngakho-ke, i-proxy sonication iphumelela kangcono ekushintsheni isitashi kunokuba uhlambe uhlobo lwe-sonication. Ukucubungula okuningiliziwe kwe-ultrasonic kukhombisa okuningi ukuphazamiseka ama-granules uma kuqhathaniswa nesitashi somdabu noma somuthi wokushisa.
I-micrographs ye-SEM ye: (a) engabonisiwe, (b) i-20min yanikezwa, (c) 40min. i-sonicated, (d) i-starch engama-60min ebizwa ngokuthi i-wheat stranules, e: Izinguquko ezakhiweni ze-wheat starch njengoba zithintekayo amandla ama-ultrasound, i-Mahsa Majzoobi, uSara Hedayati
I-Ultrasonication inganciphisa ukushisa kwama-gelatinization kakhulu. Ama-gel esitokisini esilungiswa kusuka ku-starch enezinyosi ekhombisa ukuqina kakhudlwana nemigomo ephakeme yokunamathela nokuhlanganisana uma kuqhathaniswa nesitashi somdabu. Ukuzibandakanya, ukuhlangana, ukuhlakulela nokuziqhenya kwanda kakhulu ngokuguqulwa kwe-ultrasonic kwesitashi.
I-ultrasonication isebenzisa amandla angaphansi kakhulu okufakwayo kanye nezimo zokucubungula okucindezelayo kunezinqubo ezijwayelekile zokuguqula isitashi. I-ultrasonics yama-Hielscher inikeza izigameko eziphezulu zamandla we-ultrasonic for processing processing.
Uma usosayensi wenza uphenyo lokuguqulwa kwe-starch, inguquko yenqubo yokuzama ukuthuthukisa izinqubo ezikhona ze-starch, injini yomkhiqizo eyenza imikhiqizo engcono noma emisha, noma uma unesinye isithakazelo ekuguqulweni kwesitashi: Xhumana nathi! Sizojabula ukuxoxa nawe ngekhono kanye nezinzuzo ze ultrasonication for isitashi ukuguqulwa kanye isitashi application. Sicela ugcwalise ifomu elingezansi!
Cela ulwazi oluthe xaxa nge-ultrasonic isitashi ukuguqulwa!
I-starch eguquliwe isetshenziselwa ukudla okubanzi nezinhlelo zokusebenza ezingekho ukudla. I-octenylsuccinate yesitashi iyisimiso sokubaluleka esibalulekile sama-emulsions amafutha-emanzini. Ema-stermaking cationic amaqabunga athuthukisa amandla amanzi anomile, azinzile emulsions futhi asebenze njengama-agent-sizing agents. Amanethiwekhi amaningi wokunweba ekupheleni kwamanzi afaka ama-microparticles angenangqamuzana (i-colloidal silica, i-bentonite) kanye nama-polymers ezakhiwe nge-starch modified. Okunye ukusetshenziswa kuhlanganisa isitashi se-latex dispersions noma isitashi se-granular njengesigcwalisi se-polymers.
Izihloko zesayensi mayelana ne-Ultrasonically Assisted Starch Modification
S. Manchun, J. Nunthanid, S. Limmatvapirat noP.Sriamornsak (2012): Umphumela we-Ultrasonic Treatment kuma-Physical properties we-Tapioca Starch, ku: Okuthuthukisiwe kokuPhepha koMbiko Vol. 506 (2012) iphe 294-297. [PDF]
Anet Rezek Jambrak, Zoran Herceg, Drago Šubaric, Jurislav Babic, Mladen Brncic, Suzana Rimac Brncic, Tomislav Bosiljkov, Domagoj Cvek, Branko Tripalo, Jurica Gelo (2010): Impumelelo ye-ultrasound kumakhemikhali omzimba we-starch corn, ku: Carbohydrate Polymers 79 ( 2010) 91-100.
I-Herceg IL, i-Jambrak AR, i-Šubarić D., i-Brnčić M., i-Brnčić SR, i-Badanjak M., i-Tripalo B., i-Ježek D., i-Novotni D., i-Herceg Z. (2010): Ukugcoba nokufaka impahla ye-ultrasonically treated starch corn, ku: Czech J. Food Sci., 28: 83-93. [PDF]
D. Knorr, i-BIO Ade-Omowaye no-V. Heinz (2002): Ukuthuthukiswa kokudla okunomsoco wokudla kwezitshalo ngokucubungula okungahambi kahle, ku: Proceedings of the Nutrition Society (2002), 61, 311-318. [PDF]
Imithombo Yomdabu WaseSt
Isitashi sivela emithonjeni ehlukahlukene yemvelo, njengokuthi: ummbila, ummbila we-waxy, i-high-amylose ummbila, i-tapioca, amazambane, ukolweni, irayisi, irayisi ye-waxy, i-pea (i-pea epholile, i-pea), i-oat, ibhali, i-rye, i-amaranth, i-sweet amazambane, i-oat, i-cereal, i-cockle yenkomo, i-quinoa, i-lentil, i-navy bean, i-sorghum, i-arrowroot noma i-cassava.